Iindaba -Ingcebiso ethembekileyo yokonga umbane kunye neemveliso zokhuselo lokusingqongileyo
Izinto ezininzi ezisebenza kakuhle kwiscreen sesixhobo sokuhlola esenziwe ngabantu nesikrelekrele esiyilwe yinkampani yethu ngokwemfuno zentengiso kunye nokusebenza kwemveliso.
Ukusebenza kunye neempawu zezinto ezininzi ezisebenza kakuhle kwiscreen.
1. Isondli kunye nescreen sokungcangcazela sidityaniswe saba sinye. Isondli sonke sisemzimbeni wokutywina wesiphelo sokutya sescreen esingcangcazelayo, kwaye umthombo wokungcangcazela wesiphelo sokondla ungaphandle komzimba wokutywina. Unxibelelwano oluthambileyo lwerabha lusetyenziselwa ukunxibelelana nesimbozo sokutywina, esigcina kakhulu indawo yokuphakama.
2. Isondli esingcangcazelayo sibekwe ngaphakathi kwiscreen esingcangcazelayo, esinciphisa indawo yokuvula yothuli. Isango lesango lifakwe ngokuthe ngqo kwinxalenye yokondla izibuko lokondla lokungcangcazela, okuphucula ukusebenza kokhuseleko lokusingqongileyo.
Iscreen sokudlidliza kwesikrini, ukungcangcazela kwescreen, icala lescreen alithathi nxaxheba kunyikimo, ukunciphisa umgangatho wokungcangcazela, ukunciphisa ifuthe kwisiseko. Iscreen kunye nokungcangcazela kufakelwe kumacandelo, ukungcangcazela ngokuzimeleyo, kulula ukudibanisa kunye nokugcina.
4. Isitshisi sokungcangcazela sibekwe ngaphandle kwecala lesikrini, elisusa ithuba lokuba uthuli oluninzi kulula ukungena kwigumbi lokuthwala, kwaye ukuthwala kunobomi obude benkonzo.
5. ipleyiti yokusefa yokucheba sisicamba esinecala elinye lesibini le-bar yokusefa enobuchule obuphezulu bokuhlola. Isikrini se-coke sisebenzisa i-bar yentsimbi engenasici okanye ibha ye-ceramic bar, enobomi obude obunqabileyo.
6. Ulwakhiwo lwe-6-element ephezulu-yokusebenza kwesikrini itywinwe kakuhle kwaye inefuthe elifanelekileyo lokhuselo lokusingqongileyo.
7. Zisixhenxe Inkqubo yokondla itywiniwe ekupheleni kokondla kwescreen sokungcangcazela. Imathiriyeli iphuma kwisango lechute isiya kwi-feeder, emva koko iye kwisithunywa esiphelayo sokukhutshwa kweshalali kunye nezinto zayo ezingaphezulu, kunye nezinto eziphantsi kwesikrini ukuya kwindawo yokukhupha kunye nokuhamba. Lonke unxibelelwano olunzima lutywinwe ngaphandle kwendawo yokugcwala uthuli, enokunciphisa ivolumu yomoya yokuqokelela uthuli kwiscreen sokuqhushumba komlilo, kunye nokugcina ukusetyenziswa kwamandla okususa uthuli kunye nokugcinwa kwezixhobo zokhuselo lokusingqongileyo ukuya kwindalo enkulu Indleko yendleko kunye nomsebenzi iindleko.
8.Izinto ezininzi ezisebenza ngokukuko kwiscreen somzimba phantse isondlo sobomi bonke simahla, buyisela ipleyiti yescreen kunye ne-vibration exciter.
Izinto ezininzi ezisebenza kakuhle kwiscreen, ukusebenza ngokugqwesileyo, iindleko zokusebenza eziphantsi kakhulu, lukhetho lwakho olufanelekileyo.